Ny Momba Antsika-Phu Ly Bao Mpiara. Ltd
Eto ianao : Home>Momba anay
MANKIROA NY FIVAVAHANA ANTSIKA
15+ taona niainana tamin'ny fanamboarana entana
Manamboatra valizy nanomboka ny taona 2004, natondrana tany amin'ny firenena 30+ anisan'izany i Etazonia, Eropa, Azia atsimo atsinanana, Afovoany Atsinanana sns. Manana ekipa matihanina R&D any Vietnam, ekipa QC ary fifehezana kalitao henjana. ISO9001, SGS, CE voamarina.
Miorina amin'ny karazana fitaovana dia mamokatra valizy ABS / PP / PC / Aluminium / Oxford lamba izahay.
Ny tombony azo avy amin'ny valizy dia tsy tantera-drano, hafanana avo lenta, sariaka ara-tontolo iainana, mateza, maivana sns Ampiasaina be amin'ny dia lavitra, fampiasana isan'andro, fampiroboroboana, fitsangatsanganana sns. Ny tena zava-dehibe dia manana ozinina Vietnam izahay ary vidin'ny ozinina ireo.
Ny mpiasa, ny faritra ary ny fahaiza-manao
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina amin'ny valizy azy, PLB Vietnam dia manana atrikasa maoderina 8000 Sqm, mpiasa 100+ mahay eto an-toerana. vokatra isam-bolana lehibe atolotray ny vidin'ny orinasa sy ny vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa, dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena avokoa.
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay amin'ny famokarana sy fitantanana ary fikarohana, PLB dia nanangana rafitra fitantanana kalitao manokana. Nandalo ny ISO9001: Fanamarinana rafitra kalitao 2000 ary ISO14000 rafitra fanamarinana fitantanana tontolo iainana. PLB mampihatra ny foto-kevitra momba ny famoronana lanja ny mpanjifa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa samihafa ary hanome vahaolana hatrany ho an'ny mpanjifa amin'ny olana ara-teknika.
Ny orinasa dia manana milina mikorisa / milina blister / milina fanaovana totohondry / milina fanjairana / milina fanapahana.
Manompo mpanjifa iraisam-pirenena mihoatra ny 30 izahay manerantany. Miaraka amin'ny fahaizantsika manamboatra sy manao serivisy dia nitazona fiaraha-miasa maharitra amin'ny ankamaroan'ny mpanjifanay izahay.
Ny ekipan'ny fanaraha-maso kalitao matotra dia manamarina ireo vokatra alohan'ny fandefasana azy, izay misy ny fanamarinana ny hamandoana ao anatin'ny vokatra, ny lesoka, ny tsy fandisoana azy, ny fonosana sns. Fanamarinana: ISO, SGS, CE, RTS, sns.
NY AINGA ITY
Famokarana Phu Ly Bao
NY FIVORIANA ALOHA
Ny olona dia mientana, manao ny marina ary tsy miraharaha, manavao ary manambany ny fiaraha-monina.
Ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa aloha
Aoka ho mpiara-miasa tena tsara sy matanjaka
Serivisy tsara indrindra ； Fikatsahana hatsaram-panahy;
Fikatsahana amin'ny fahalavorariana
Mankasitraka tanteraka amin'ny fifandraisana rehetra.